१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:२५ April 30, 2018
LeaveaComment on पुरुषले खाली पेटमा लसुन खानुपर्ने ७ कारण
राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयका सहायक प्रध्यापक डा. अरुण दधिचले लसुनका विभिन्न फाइदाबारे यहाँ जानकारी दिएका छन् । लसुनमा पाइने प्रोटिनले शरिरिक सुगठनमा सहयोग पुर्याउँछ । यसमा कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ जसले शरिरबाट कमजोरी हटाउँछ । यसले शरिरलाई ऊर्जावान् राख्नसमेत सहयोग पुर्याउँछ । यसमा पाइने क्याल्सियमले हड्डी बलियो बनाउँछ । यसमा पाइने एलिसिनले ‘फ्याट बर्निङ’ प्रोसेस तीब्र राख्छ । […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:१२ April 30, 2018
LeaveaComment on सिस्नु’ जसले च्वाट्टै पार्छ यी रोगहरु !
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १२:२० April 30, 2018
LeaveaComment on खुर्सानीको प्रयोग गरेर कसरी मिठो दही जमाउने ? जान्नुहोस्
तपार्इलाई दही एकदमै मन पर्छ तर तपार्इ घरमा दही जमाउन चाहेर पनि बजारको डेरीबाट किनेर ल्याएजस्तो दही जमाउन सक्नुभएको छैन भने यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ । दहीबाट दही जमाउने यो दही जमाउने पपुरानो तरिका हो । यसको लागि सुरुमा दहीलाई उमाल्नु पर्छ र एकछिनको लागि छोडिदिनुपर्छ । दूध हल्का मनतातो भएपछि त्यसमा २ चम्चा दही राख्नुपर्छ […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १२:१८ April 30, 2018
LeaveaComment on स्वास्थ्यको लागि दुध राम्रो कि दहि हेर्नुहोस !
दूधलाई फर्मेन्टेसन गरी दही बनाइन्छ । यो क्रियालाई दूध सुरक्षित राख्ने एक विधिको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । किनकि दहीलाई केही दिनसम्म चिसोमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भने दूधलाई यसरी राख्दा बिग्रन्छ । दही बनाउने समयमा दूधमा प्रयोग गरिने जोडनको माध्यमबाट ल्याक्टोब्यासिल जीवाणु सक्रिय भई दूधमा रहेको ल्याक्टोज चिनीलाई ल्याक्टिक एसिडमा परिणत गर्छ, फलस्वरुप दही बन्छ […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १२:१५ April 30, 2018
LeaveaComment on तपाई ३० वर्ष पुग्नुभयो ? अब तपाईंलाई आवश्यक छ यी १० आहारा
द नेशनल डाइट एण्ड न्यूट्रिशन सर्वेका अनुसार ३० वर्ष पार गरेपछि धेरैजसोलाई आवश्यक पोषक तत्व जस्तै आइरन, क्याल्सियमको कमी हुन्छ । थुप्रै डाक्टरहरुले ३० वर्ष पार गरेपछि मेटाबोलिक रेटमा कमी हुने र शरिरमा रोग प्रतिरोधी क्षमतामा पनि ह्रास आउने गर्दछ । यसले थुप्रै रोगको सम्भावना बढ्ने गर्दछ । त्यसकारण तीस वर्ष पार गरेपछि व्यायामका साथै […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १२:११ April 30, 2018
LeaveaComment on खाली पेटमा मह मिसाएर दैनिक एक पोटी लसुन खानुहोस्, यी १० फाइदा लिनुहोस्
मह एन्टी बायोटिक र एन्टी ब्याक्टेरियल हुन्छ भने लसुनमा एलिसिन र फाइबरजस्ता फाइदाजनक न्यूट्रियन्ट्स हुने गर्दछ । यी दुबै मिसाएर खाँदा तपाईंको तौल घटाउनुका साथै विभिन्न रोगबाट छुटकारा दिनेछ । आउनुहोस् यी दुबै मिसाएर खानुका १० फाइदाः तौल घट्नुः शरिर र लसुनको मिश्रणले शरिरको बोसोलाई कम गर्दछ । यसले तौल घटाउन सहयोग गर्दछ । मुटुको […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १२:०९ April 30, 2018
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १२:०६ April 30, 2018
LeaveaComment on ओठको कालोपन हटाउने ९ प्राकृतिक उपाय
ओठ मानिसको सुन्दरताको प्रतिरुप हो। विशेषगरी महिलाहरु ओठ सुन्दर बनाउन विभिन्न उपाय अपनाउछन्। लिपिस्टिक, बाम, मोस्चराइजर आदि अनेक प्रकारका साधन लगाउँछन्। सुन्दर बनाउन लगाइएका यस्ता कुराले उल्टै ओठ कालो बनाइरहेका हुन्छन्। यसले महिलाहरुलाई निराश बनाइरहेको हुनसक्छ। आउनुहोस्, ओठको कालोपन हटाउन प्रयोग गर्न सकिने प्राकृतिक उपायबारे थाहा पाउनुहोस् : १. कोको बटर : दुई टेबलचम्चा कोको […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार ११:०० April 30, 2018
LeaveaComment on एक हप्तामै यसरी हटाउनुहोस् अनुहारमा भएको छिद्र
अनुहारको रोम छिद्रमा देखिने स-सनो कालो दाग धेरैका लागि चिन्ताको बिषय बन्ने गर्छ । हुनपनि यसले अनुहारलाई कुरुप बनाउँछ ।यसबाट छुटकारा पाउनका लागि कतिले महंगो कस्मेटिक्स पनि प्रयोग गर्छन् । तर, अनुहारको रोमछिद्रमा जमेको फोहोरलाई निकाल्न घरेलु बिधी प्रभावकारी हुन्छ, जो हामीसँग सजिलै उपलब्ध हुन्छ । १. दालचिनी र महको प्रयोग गरौं मह एक यस्तो […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १०:५८ April 30, 2018
LeaveaComment on रुघाखोकीबाट बच्न चाहनुहुन्छ ? नियमित खानुहोस काँचो प्याज
प्रायजसो सबैको भान्सामा दैनिक रुपमा प्रयोग हुने वस्तु हो प्याज।सामान्य तरकारी होस् या मासुका परिकारमा त प्याज नभइ हुँदैन।त्यसैले हाम्रो भान्सामा प्याज कहिले छुट्दैन। हामीले चाहे भुटनका रुपमा होस् वा सदालका रुपमा प्याज खाएकै हुन्छौं। प्याजले खानाका परिकारमा स्वाद मात्रै दिँदैन स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा गर्छ।नियमित काँचो प्याज सेवन गर्दा फाइदै फाइदा छन्। यस्ता फाइदा हुन्छन् […]